Janoary 27, 2014 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Tongasoa eto Pirates ny Pearibbean! rehefa vita ny fironana amin, ny fitana ny mikitoantoana Tsirom Forest tsara ianao mandehana any amin'ny Papa fehezina…ihany 300 hafahafa ny handeha! Mba efa nilaza azy eo anoloan'ny fa izy ireto no mampino haavon'ny manan-danja toy ny fianarana fototra, samy singa vaovao ho an'ny lalao dia nampidirina tsikelikely manao ambaratonga mafy kokoa tatỳ aoriana ny fanamby mahafinaritra tsy fetra ny asa sarotra fa ravin ianao mandinika ny vokatry ny fanipazana ny finday any an-gana kamory…eny tsara fanaony isika miresaka momba izany! ‘
Level 16 mametraka anay ho eo an-manga hankerỳ amin'ny asa ny Manazava ireo spunky siny, amin'ny sakana vitsivitsy teny an-dalana mazava ho azy. miaraka 90 000 hevitra mba hahazoana halehanao mba mila rehetra ny 20 papas! I fahazoan-dalana voalohany